किन गरिन्छ छठ पर्वमा सूर्यको पूजा ?को हुन् छठ माता ? « News24 : Premium News Channel
किन गरिन्छ छठ पर्वमा सूर्यको पूजा ?को हुन् छठ माता ?
विराटनगर, कात्तिक-७। लोक आस्थाको महान् पर्व छठ भोलि विधिवत् रूपमा सुरु हुँदैछ । कात्तिक शुक्ल चतुर्थीमा सुरु भई सप्तमी तिथिमा उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य अर्पण गरेपछि विधिवत् रूपमा यो पर्व सम्पन्न हुन्छ ।
पूजापाठको क्रममा सोही खीर देवीदेउतालाई चढाइन्छ । सो खीर प्रसादका रूपमा आफू पनि ग्रहण गरिने र परिवार सदस्यका बीचमा वितरण गरिन्छ । सो प्रसाद ग्रहण गरेपछि व्रतालु महिलाको पुनः उपवास सुरु हुन्छ । लगातार ३६ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म उपवास गरेर अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य अर्पण गरेपछि छठ पर्वको विधिवत् समापन हुन्छ ।